Breaking News; Ralhrang Vanlawng Chiahnak Bomb In An Puah Hnawh - Chin Eleven News
Magwee ralkap vanlawng chianak sakhan bom puakhnawhasi. (မကွေးလေတပ်ဌာနချုပ်)ဧရိယာအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးအချို့ ဗုံးခွဲခံရ); Magwe ramthen, Magwe Myo ahaum mi Min Aung Hlaing ralhrang ralkap vanlawng chianak sakhan ah bomapuak tiah sakhan pawngkam ahaummi minung hna nih an an fehter. Hliamatuarmi le bom puah ruangah rawkralhnak zeitluk in dahachuahpi timi cu theihasi rih lo. Cridi- people media:
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးမြို့ရှိ ၊မကွေးလေတပ်စခန်း ဧရိယာအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးအချို့သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ ဒေသခံများက ပြောဆိုမှုများ ရှိလာပါတယ်။ “ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အသံတွေ ကြားရပါတယ်”လို့ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ လတ်တလောအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထုတ်ပြန်မှုတော့ မရှိသေးပါဘူး။ #PeopleMedia #မကွေးလေတပ်; The chinlight
Relchap: Zahan August ni7,2021 Sagaing ramthen shwebo peng, Saipin khua in ralhrang motor2le Monywa khua in rakhrang Motor3hne le Monywa khua inakal mi ralhrang Motor5hna cu Zahan suimilam 8:00pm ah, Dipeyin peng , Kyiywa timi khua ahaho to hngalh lomi phu nih Mine bomb in an thuat hna.
Ralkap Sinah A Ttang Mipa Cu PDF Nih An Thah